Sida Loo Sameeyo GIF Animated Ololahaaga Xiga ee Suuqgeynta Emailka Adigoo isticmaalaya Photoshop | Martech Zone
Sida Loo Sameeyo GIF Animated Ololaha Suuqgeynta Iimaylkaaga Xiga Adigoo Adeegsanaya Photoshop
Jimco, Janaayo 28, 2022 Jimco, Janaayo 28, 2022 Douglas Karr
Waxaan ku jirnaa waqti cajiib ah la shaqeynta macmiilka muhiimka ah ee Closet52, an dukaanka dharka online taas oo aanu ku suntannay oo aanu ka soo dhisnay shirkad fashion ka dhisan oo caan ah oo ku taal New York. Hogaankoodu waxa uu had iyo jeer nagala shaqeeyaa fikradaha wada shaqayneed ee ololaha ama istaraatiijiyada soo socda ee aanu fulinayno. Iyada oo qayb ka ah hirgelintooda, waanu geynay Klaviyo waayo, Ka adeegso dukaameeyaha. Klaviyo waa madal suuq-geyneed oo si fiican loo yaqaan oo leh is dhexgalka aad u adag ee Shopify iyo sidoo kale dukaamo badan oo Apps ah.
Muuqaalka aan ugu jecelahay waa iyaga A / B imtixaanka ee Klaviyo. Waxaad samayn kartaa noocyo kala duwan oo iimaylka ah, Klaviyo ayaa soo diri doonta muunad, sugi doonta jawaabta, ka dibna u diri doona macaamiisha soo hadhay nooca guusha - dhammaan si toos ah.
Macmiilkayagu waxa uu iska diiwaangaliyaa iimaylada moodada ee warshadaha oo waxa uu sii waday in uu xuso inta ay jeclaysteen iimaylada qaarkood ee leh muuqaal sawiro alaab ah. Waxay weydiiyeen haddii aan taas samayn karno waanan oggolaaday oo waxaan dhisay olole leh tijaabo A / B ah halkaas oo aan u dirnay hal nuqul oo leh animation 4 alaab ah, iyo mid kale oo leh hal, qurux badan, muuqaal taagan. Ololuhu waa dharbaaxo iibinta dharkooda dayrta maadaama ay keenayaan khadadka alaabta cusub.
Nooca A: GIF firfircoon
Nooca B: Sawirka taagan
Ammaanta sawirka waxaa leh dadka kartida leh ee jooga Zeelum.
Muunad-qaadista ololaha ayaa wali socota hadda, laakiin way iska caddahay in iimaylka ku jira garaafyada firfircoon uu aad uga sarreeyo sawirka taagan… heerka furan ee 7%.… laakiin yaab leh 3 jeer qiimaha gujinta (CTR) Waxaan u maleynayaa in xaqiiqda ah in GIF animated uu dhigay dhowr nooc oo kala duwan horteed macmiilka ayaa horseeday booqdayaal aad u badan.
Sida Loo Sameeyo GIF Animated Anoo Isticmaalaya Photoshop
Anigu ma ihi nooc kasta oo pro ah Photoshop. Xaqiiqdii, waqtiyada kaliya ee aan caadi ahaan isticmaalo Adobe Creative Cloud ee Photoshop waa in meesha laga saaro asalka iyo in la dhejiyo sawirada, sida in la saaro shaashadda korka ee laptop ama qalabka gacanta. Si kastaba ha ahaatee, waxaan sameeyay qaar ka mid ah qodista khadka oo aan ogaaday sida loo sameeyo animation. Interface-ka isticmaalaha tani maaha mid ugu fudud, laakiin 20 daqiiqo gudahood iyo ka dib markii aan akhriyay casharrada qaar, waxaan awooday inaan garaaco.
Diyaarinta sawirada ilahayaga:
cabbir - GIF-yada firfircooni waxay noqon karaan kuwo aad u weyn, sidaa darteed waxaan hubiyay inaan dejiyo cabbirrada faylka Photoshop-ka si ay ula mid noqdaan 600px ballaaran ee qaabka emailka ballaaran.
riixo - Sawirradeenii asalka ahaa waxay ahaayeen xallin sare iyo cabbir faylal aad u sarreeya, markaa waan beddelay oo ku cadaadiyay Kraken JPG-yada leh cabbirka faylka oo aad uga yar.
Kalaguurka - Iyadoo laga yaabo inaad ku darto inaad ku darto animation Farsamooyinka (tusaale: kala-guurka sii libdhaynaya) inta u dhaxaysa xayndaabyada, taas oo ku kordhinaysa cabbir badan faylkaaga si aan uga fogaado inaan taas sameeyo.
Si loo dhiso animation ee Photoshop:
Samee fayl cusub oo leh cabbirada ku habboon cabbirada saxda ah ee aad ku dhejinayso template emailkaaga.
Dooro Daaqadda > Jadwalka wakhtiga si loo suurtogeliyo aragtida wakhtiga ee saldhiga Photoshop.
Ku dar mid walba sawirka lakabka cusub gudaha Photoshop.
Riix Samee Frame Animaee ka jira Gobolka Timeline.
Dhinaca midig ee gobolka Timeline, dooro liiska hamburgerka oo dooro Samee Frames lakabyada.
Gobolka Timeline gudahooda, waad awoodaa u jiid fareemada nidaamka in aad jeclaan lahayd in sawiradu ka soo muuqdaan.
Guji jir kasta oo ay ku qoran tahay 0 ilbiriqsi, oo dooro wakhtiga aad jeclaan lahayd in jirku muujiyo. Waxaan doortay 2.0 ilbiriqsi halkii jir.
Hoos-u-dhigga ka hooseeya meeraha, dooro weligaaba si loo hubiyo wareegyada animation-ka si joogto ah.
Click ah Waa maxay si aad u aragto animation-kaaga.
Riix Faylka > Dhoofinta > Kaydi Shabakadda (Dhaxalka).
Dooro GIF laga bilaabo doorashooyinka dhanka bidix ee sare ee shaashadda Dhoofinta.
Haddi sawiradaadu aanay hufnayn, calaamada ka saar Transparency doorasho.
Riix Save oo dhoofi faylkaaga.
Waa kaas! Hadda waxaad haysataa GIF firfircoon si aad ugu shubto goobta iimaylkaaga.
Daah-: Daboolka52 waa macmiilka shirkaddayda, Highbridge. Waxaan u isticmaalayaa xiriiriyeyaasha ku xiran maqaalkan oo dhan Adobe, Klaviyo, Kraken, Iyo Soo iibso.
Tags: imtixaanka abadobeadobe cloud Cloudadobe Photoshopfirfircoonaanta gif-marka-gujiskadaruurta hal-abuurka ahctrecommerceemaylka e-commerceemayl garaadi karayaolole emailEmail Marketingimtixaanka emaylkahighbridgesida loosida loo sameeyo gif animatedfaafidda sawirkaKlaviyokrakenololaha suuq-geyntaheerka furanphotoshopPhotoshop giftababarka Photoshopdukaanka